Siad Haji Oo Aanan Kasoo Muuqan Xulka Soomaaliya Ee Wajahaya Cumaan – Garsoore Sports
Siad Haji Oo…
Cayaaryahanka kooxda San Jose Earthquakes ee horyaalka dalka Mareykanka ee MLSka Siad Haji, ayaan kasoo muuqan kooxda xulkeena kubbada-cagta Soomaaliya ee dalka Qatar kula cayaaraysa Dalka Cumaan isreebreebka Tartanka FIFA Arab Cup goordhow.
Xiriirka kubbada-cagta Soomaaliya ma xaqiijin sababta uu u iman waayay laacibkan khadka-dhexe ee aadka loo qiimeeyo inkastoo tababaraha xulka uu kulanka kahor sheegay in uu safka xulka ku jiro oo aanu xaqiinin karin inuu safanayo iyo in kale balse gebi ahaanba wuu seegay kulanka maanta.
Taasi waxay niyad jabisay jamaahiirta xulkeena Soomaaliya oo niyada ku hayay in qaranka uu caawa helayo adeegga xiddigan.
Siyaad waa cayaaryahan xirfad badan oo la dhihi karo waa mid kamid ah cayaaryahanadda ugu wanaagsan Soomaalida waqtigan.
Wuxuu leeyahay awood muuqata oo heer sarreeysa. Goolasha banaanka ayuu ka toogan karaa. mararka qaar wuxuu dhex jeexi karaa tiro cayaartooy ah wuxuuna awoodaa inuu kubbadaha ka dhex saaro meelaha ciriiriga ah. Xulkeenana wuxuu ku yeelan karaa sameeyn muuqata.
Xiriirka weli ma caddayn sababta hase yeeshee waxaa macquul ah inuu kasoo gaari waayay kulankan ay suurtagal tahay inuu safto haddii ay ka adkaadaan xulka Cumaan oo ay u gudbaan wareegga guruubyada ee tartankan FIFA Arab Cup 2021.